Zelda: Breath of the Wild efa mandeha tsara amin'ny PC | Vaovao momba ny gadget
Miatrika izay araky ny tsikera izahay, ary na dia tsy Nintendo irery aza, dia mety ho iray amin'ireo lalao tamin'ny folo taona. Ary ny naotin'ireo haino aman-jery manampahaizana manokana dia efa manana salanisa 97 isa, izay mampifanohitra ny tendrony amin'ny isa 7,4 an'ireo mpampiasa, amin'ny isa sahabo ho 1.500. Na izany aza, ny ivon-tsikera dia tato ho ato manodidina ny piraty amin'ny Nintendo Switch. Ny antsipiriany lehibe farany dia zavatra mitovy amin'izany, izay Zelda: fofonain'ny ny Wild efa miharihary amin'ny PC, mamela antsika hankafy amin'ity lohateny ity amin'ny fomba tsy namana.
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, nanararaotra ny rafitra WiiU izy ireo, nanahaka tamin'ny solosaina, hahafahany mihazakazaka Zelda: fofonain'ny ny Wild amin'ny PC. Ny fanontaniana dia hoe piraty ve ny maka tahaka ny lalao amin'ny PC na tsia. Mino aho fa miharihary ny valiny, satria tsy miatrika lalao ivelan'ny tsena isika na folo taona lasa izay taorian'ny nanombohany, fa Zelda: fofonain'ny ny Wild ankehitriny dia ny sainan'i Nintendo raha resaka lalao video no resahina, ary misy fomba maro ara-dalàna ahazoana azy io.
Raha ity fitaovana ity dia mihodina WiiU amin'ny PC sy milalao Zelda: fofonain'ny ny Wild Hivoaka amin'ny Internet tsy ho ela izy io. Tsy tadidinay izay lalao izay telo herinandro monja tamin'ny fiainana no voajirika tamin'ity fomba ity, na izany aza, ny tsy fananan'ny WiiU loharano teknika vitsy, ary koa ny momba ny lalao, dia nilalao betsaka tamin'io raharaha io. Nintendo dia manao zavatra kely kokoa ary kely kokoa hisorohana an'io karazana zavatra io, satria fantatsika fa "mora" ny fampiasana fomba hafa ahafahana milalao amin'ireo kinova samihafa amin'ny Nintendo DS. Jereo ny fandehany amin'ny PC amin'ny ITY rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Zelda: Breath of the Wild dia efa mandeha tsara amin'ny PC
Ny tolotra aretim-po dia amin'izao fotoana izao ao amin'ny PlayStation Store